समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अधिकार सुनिश्चित गर्छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अधिकार सुनिश्चित गर्छौं
समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अधिकार सुनिश्चित गर्छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता February 21, 2018	0 191 Views
पूर्ण घर्ती मगर
पाँच नम्बर प्रदेशसभा सभामुख
रुकुम पूर्वबाट प्रदे शसभा सदस् यमा निर्वाचित पूर्ण घर्ती मगर भर्खरै पाँच नं. प्रदे शसभाको अध्यक्ष चुनिनुभएको छ । माओ वादी जनयुद्धकालमा पहिलो जनसरकार प्रमुख हुनुभएका घर्ती प्रदे शसभा सभामुखमा निर्वाचित भइसके पछि कानून निर्माण र सभा सञ्चालनका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहाँ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
प्रदे शसभाले कसरी काम गदैर् छ ?
प्रदे शसभाको पहिलो अभ्यास गदैर् छौ ं । यसको मुख्य जिम्मे वारी भने को कानून निर्माण गनेर् नै हो  । अनि त्यही कानूनको परिधिभित्र रहे र यो प्रदे शको विकास गनेर् हो  । जनसरो कारका विषयहरुलाई उचित सम्बो धन गर्नका लागि क्रियाशील हुन्छ । तर मुख्यतयाः संविधानसभाले संविधानको निर्माण गनेर् जिम्मे वारी थियो  । त्यस् तै प्रदे शसभाले कानून निर्माणमा ध्यान दिने छ ।
कस्ता कानून निर्माण गर्नुहुन्छ ?
यो हाम्रा लागि चुनौ तीपूर्ण नै छ । अहिले तीन तहका सरकार छन् जुन आफै मा स् वायत्त छन् । अहिले को अवस् था हे नेर् हो भने पा“च नम्बरमा पनि प्रहरीको कमाण्ड कतै पो खराले कतै तुलसीपुरले गरिरहे को अवस् था छ । तर अब एउटै कमाण्डमा ल्याउन जरुरी छ । पुरानो संरचनालाई नया“ढंगले अगाडि बनाउनुपनेर् छ । पुरानो लाई नया“मा बदल्दाखे री स् वाभाविकरुपले के ही जटिलता पनि छन् । कर्मचारी संयन्त्रको परिचालन, एक ठाउ“बाट अकोर् ठाउ“ जान नचाहने , सबै ले के न्द्र ताक्ने प्रवृत्ति हावी छ । यी यावत समस् याहरुलाई सम्बो धन गनेर् गरी कानून निर्माण गरिने छ । के न्द्रीय कानूनस“ग नबाझिने गरी हामीले प्रदे शको कानून निर्माण गछौर् ं । एउटा प्रदे श र अकोर् प्रदे शबीचको सहकार्यको कुरा, एउटा तह र अकोर् तहबीचको समझदारीको कुरा, स् थानीय तह र प्रदे शबीच साधनस्रो तमा के ही तानातानको अवस् था आउनसक्छ । त्यस् तै प्रदे श र के न्द्रको बीचमा पनि यो समस् या आउनसक्छ । कतिपय स्रो त साधन साझा पनि हुन्छन् । जस् तो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज के न्द्र सरकार मातहत त हु“दै हो सीमाको हिसावले भन्ने हो भने पा“च नम्बरमा पनि पर्छ र सात नम्बरमा पनि पर्छ । ढो र पाटन चार मा पनि पर्छ र पा“चमा पनि पर्छ । यी यावत जटिलताहरु छन् । शुरु–शुरुमा यी समस् या हुन्छन् नै  । मलाई लाग्छ कानून बनाएर यी सबै जटिलताको समाधान हामीले खो ज्ने छांै  ।
अहिले मे रो र ते रो भन्दा पनि समन्वयात्मक हिसाबले अघि बढ्ने यो जनामा हुनुहुन्छ ?
हो  । एक आपसमा समन्वय गदैर् र आफ्नो अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गदैर् अघि बढ्ने यो जनामा हामी छौ ं । समन्वय मात्रै गनेर् हो भने त संघीयताको अर्थ नै हु“दै न । संघीयता भने को स् थानीय तहलाई शक्तिसम्पन्न गराउने कुरा हो  । त्यसै ले समन्वय मात्रै ग¥यो भने यसको अर्थ हु“दै न । यसर्थ समन्वय गदैर् एकअकोर् प्रदे शका विशे षताहरुलाई पनि ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नुपर्छ । हामी पनि त्यसै गरी अघि बढ्ने छौ ं ।
प्राथमिकता दिएर बनाउने कानून के हुन सक्छन् ?
हामी त पहिलो चो टि प्रदे श संरचनामा प्रवे श गरे का छौ ं । हामी नया“ अभ्यासमा छौ ं । बनिबनाउ सरकार, बनिबनाउ भौ तिक संरचना वा नीति हामीस“ग छै नन् । त्यसै ले सबै चिजहरु हामीले नया“ शुरुवात गर्नुपनेर् छ । तर पनि प्राथमिकताका कुरा गर्दा लिंगीय उत्पीडन र जातीय उत्पीडनका कुराहरुलाई सशक्त ढंगले सम्बो धन गर्न प्रदे श कानून निर्माण गनेर् छौ ं । क्रमशः हु“दै जान्छ ।
स्थानीय तह प्रदे शसभाले कहिले कानून बनाउला र काम गरौ ंला भने र बसे का छन् । कति समय लाग्ला ?
कति छिटो भन्ने कुरा विभिन्न कुराको व्यवस् थापन गर्नुपनेर् छ । हाम्रो सवालमा भन्नुहुन्छ भने पा“च नम्बर प्रदे शको भौ तिक संरचनाहरु अझै व्यवस् िथत हुन सके का छै नन् । प्रदे शसभाको आफ्नै गरिमा हुन्छ । त्यो अनुसार हलको व्यवस् था समे त हुनसके को छै न । ती विषयलाई टे वल गर्न पनि के ही समय लाग्ने दे खिन्छ । तर पनि तत्काल गर्नुपनेर् कामहरुलाई हामीले प्राथमिकताका साथ गनेर् छौ ं । जस् तै स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक कति हुने भन्ने कुरा नै अहिले सम्म निश्चित भएको छै न, यत्रो समय भइसक्यो  । यसलाई पनि हे र्नुपनेर् छ । त्यस् तै प्रदे शमा तत्काल गर्नुपनेर् कामहरु धे रै हुनसक्लान् । जस् तो सुरक्षा निकाय, कार्यालय व्यवस् थापन, प्रदे शको नामको कुरा छ, स् थायी राजधानीको कुरा छ । यी सवै काम गर्नुपनेर् छ र यस् ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपनेर् दे खिन्छ । तर अहिले नै यही विषयलाई प्राथमिकतामा भन्दा पनि विज्ञहरुस“ग छलफल
गछौर् ं । कर्मचारीसग छलफल गछौर् ं । कार्यालय व्यवस् थापनदे खि कानून निर्माणसम्म एउटा प्राथमिकता निर्धारण गरे र अघि बढ्छौ ं । अहिले नै यो –यो प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने अवस् था छै न ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स् थापना गरिएको छ, तर आवश्यक कानूनविना प्रभावकारी भएन भन्ने छ नि ?
कार्य सम्पादनमा भने जस् तो नभएकाले प्रभावकारी भएन कि भन्ने गुनासो पनि हो ला तर यसको खाका बनाएर सहज बनाउने काम स् वयंले गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो हो ला । कार्य विन्यासमा तालमे ल नहु“दा प्रभावकारी भएन भन्ने हुनसक्ला तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुको सरसल्लाह लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर स् थानीय तहमा न्यायिक समिति मात्रै नभएर धे रै समितिहरु छन् ती सबै हामीले पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याएका छांै  । हिजो का गाविसहरुमा जुन काम हुन्थे त्यो भन्दा धे रै काम अहिले वडा तहमा हुन्छन् । त्यसो हु“दा जिम्मे वारीका हिसाबले के ही प्रभावकारी हुन नसके का पनि हो लान् । तर त्यो कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विज्ञहरुबाट सुझाव लिएर हुन्छ कि प्रशिक्षणको व्यवस् था गरे र हुन्छ गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनमा कानुनविद्हरुको सहयो ग लिन जरुरी छ । हामीले पनि प्रदे श तहबाट त्यो व्यवस् थाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गनेर् छौ ं ।
अधिकारबिनाका न्यायाधीश बनाइयो भन्ने गुनासो छ, न्यायिक समितिको ?
संस् थागतरुपमा न्यायिक समितिलाई दक्ष बनाउने काममा कमी भएको हो ला । तर त्यो ठाउ“मा पुगे काहरुले खुबी प्रदर्शन गनेर् पनि हो नि । मलाई मे रो संस् थाले जे जिम्मे वारी दियो तर मलाई मे रो संस् थाले सिकाएन र म असक्षम भए“ भन्न मिल्दै न । मै ले पनि त त्यो ठाउ“मा पुगे पछि मे हनत गर्नुप¥यो नि । कहा“–कहा“बाट सहयो ग लिने हो , के कुरा सिक्ने हो , त्यो सबै सहयो ग लिएर आफ्नो खुबी प्रदर्शन गनेर् हो  । पार्टी वा राज्यले सबै कुरा मिलाई दे ओ स् भन्ने कुरा ठीक हो इन । आफूले पनि भूमिका अनुसारको विकास गनेर् काम त गर्नुपर्छ । दो स्रो कुरा राज्यले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी स्रो त साधनयुक्त र दक्ष बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसतर्फ प्रदे शसभाले पनि काम गनेर् छ गुनासो गरिरहनु नपर्ला ।
तपाइ पहिलो जनसरकार प्रमुख पनि हो । प्रदे ससभाको प्रमुख हु“दा उपलव्धि हो कि कहा“ आइपुगियो भन्ने लाग्दै न ?
मान्छे को जिम्मे वारी र अवसरहरु ऐ तिहासिक घटनाक्रमहरुले निर्धारण गदोर् रहे छ । त्यसवे ला जनसत्ताको प्रमुख हुने मे रो आफ्नो रहर वा व्यक्तिगत रुचिको कारण भन्दा पनि त्यतिबे लाको विकसित जनयुद्धको प्रक्रियाले मलाई त्यो ठाउ“मा पु¥याएको थियो  । त्यो भूमिकालाई सके सम्म कुशलतापूर्वक निर्वाह पनि गरे को हु“ । जनताको ने तृत्व गनेर् अवसर मलाई प्राप्त भएको थियो र त्यो कामप्रति अहिले पनि मलाई गर्व छ । त्यतिबे ला हामीले गनेर् काम भने को जनताकै पक्षमा थियो  । जनताकै आवाजलाई सम्बो धन गरे र जनसत्ताको अभ्यास त्यतिबे लाको वर्ग संघर्षले स् थानीयस् तरमा सरकारको उपस् िथति नभएपछि जनतालाई सुशासन दिनको निम्ति जनसत्ताको अभ्यास गरे का हौ ं । जिल्लामा निर्वाचनद्वारा नै जनसत्ताको स् थापना गरे का हौ ं । हामी त्यो बे ला बिद्रो हमा थियौ ं । अहिले विद्रो ही शक्ति आफै नीति निर्माण गनेर् तहमा छ । त्यो तहमा आउने बे लामा घटना प्रक्रियाले मलाई अहिले को ठाउ“मा ल्याइपु¥याएको हो  । यसलाई मै ले स् वाभाविक र ऐ तिहासिक अवसरको रुपमा लिएको छु भने यो एउटा सकारात्मक चुनौ ती पनि हो  ।
यसअघिको जनसरकारका लिखत अब के हुन्छन् ?
यो विषयमा त यसअघि पनि मै ले भन्दै आइरहे को छु र वृहत् शान्ति सम्झौ तामा पनि जनसत्ताले गरे का निर्णयहरुलाई मान्यता दिने भन्ने कुरा उल्ले ख भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा पार्टी प्रवे श गरिसके पछि सम्बन्धित जिल्लास् तरीय राजनीतिक दलहरुले पनि जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने भन्ने कुरामा सहमति गरे का हौ ं । रुकुम, रो ल्पा, सल्यानमा हामीले त्यस् ता सहमति गरे का थियौ ं । त्यसै ले अहिले पनि कुरा के हो भने ती निर्णयहरुलाई बे हिच्किचाहट पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो  । हिजो त्यो प्रक्रियामा सामे ल भएका पक्षहरुबीच यो वा त्यो बहानामा अल्झाउने अथवा अड्को थापे र त्यसलाई अल्झाउने भने को राम्रो हो इन । त्यसलाई राजनीतिक घटनाको रुपमा भन्दा पनि मै ले कस्तो बुझे को छु भने अहिले मान्छे मा लो भ पलाएको छ । मानौ ं त्यतिबे लामा ६० हजारमा बे चे को जमिन अहिले पा“च लाख भन्दा धे रै पर्छ हो ला । ती लिखतहरु जनसत्ताले गरे को थियो  । तर पुरानो राज्यसत्ताले त्यसलाई मान्यता नदिएर यो हु“दै न भने र निदेर् शन ग¥यो मालपो त वा नापी शाखामा आउ“दाखे री त्यतिखे र । अहिले पनि त्यही कुरामा अड्को थापे र यो हु“दै न कि पै सा थप्नु प¥यो कि भने यो हुदै न म आफ्नो दावी छाड्दै न भने र निहु खो जे का घटनाहरु धे रै छन् । त्यसो गर्नुहु“दै न । त्यतिबे ला जे लिखत थियो त्यसको आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामी त्यतिवे ला लचिलो पनि भएका थियौ ं । जनसत्ताले गरे का लिखतहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछि किन्ने र बे च्ने दुबै पक्ष सहमत हुन्छ भने आफ्नो ढंगले मालपो तमै गएर पास गर्नुस् पनि भने का थियौ ं । कुनै पनि रो कटो क थिएन । हो इन भने जनसत्ताले गरे का निर्णय मान्नुस् पनि भने कै हो  । तर अहिले आएर हुदै न भन्ने कुरा गलत हो  । कसै ले गरिहाले प्रदे शसभाले समस् या सुल्झाउने को सिस गर्छ ।
जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने कानून बनाउनुहुन्छ त ?
गछौर् ं, गर्नुपर्छ । किनभने वृहत् शान्ति सम्झौ ताको स् िपरिटअनुसार जनसत्ताले गरे का निर्णयहरुलाई जो न्यायिक छन् ती सबै कुराहरुलाई हामीले हल गनेर् गरी अघि बढ्छौ ं । हल गर्नु पनि पर्छ । किनभने पुरानो सत्ता अहिले त्यो अवस् थामा त छै न । राज्यको पुनरसंरचना भइसके को छ । हामी स् थानीय, संघ र प्रदे शमा गइसके का छौ  । त्यसै ले हिजो बिद्रो ही र सत्तापक्षबीच भएका सम्झौ ता अहिले कार्यान्वयन गरे र अघि बढ्नुपर्छ । यदि त्यस् तो गरिएन भने त्यसले अकोर् बिद्रो ह निम्त्याउनसक्छ । जनतामा अविश्वास पै दा हुने छ, राज्यप्रति नै अविश्वास पै दा हुने छ । त्यसै ले यस् तो अवस् था आउन दिनुहु“दै न । त्यसलाई कानुनीरुपमा प्रदे शले समस् या हल गनेर् छ ।
अन्त्यमा, प्रदे शको स् थायी मुकामको समस् या कसरी हल हुन्छ ?
संघीयता भने कै जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने कुरा हो  । राज्यको से वा सुविधालाई जनताको नजिक पु¥याउने कुरा हो  । त्यो भने को जनताले से वा सुविधा लिने ठाउ“ सबै को पायक पनेर् ठाउ हो स् भन्ने हो  । अथवा सबै को बीचमा परो स भन्ने कुरा हो  । तर सरकारले तो के का अस् थायी राजधानीहरु त्यति उपयुक्त दे खिदै नन् । त्यसै ले मलाई के लाग्छ भने यता वा उता भन्दा पनि जनताको भावनालाई सम्वो धन गनेर् गरी, सबै का आकांक्षाहरुलाई समे ट्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका मै ले खे ल्ने छु । त्यो निर्णय प्रदे शसभाबाट हुन्छ, तर समय पर्खिनुपर्छ ।
Previous: कोटभीर सुचारु गराउने मौखिक सहमति
Next: स्थानीयले आगो नियन्त्रण गरे